← Xuska 30-Guurada Maalinta Shuhadada ee SNM 17/10/1984kii  17/10/2014ka,Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale.
Xildhibaano Ka Mida Golaha Degaanka Ee Ceerigaabo Oo Beeniyay Warar Been Abuura Oo Warbaahinta Qaarkod Baahiyeen. →
Siciid Cali Muuse ayaa ii mariyay sheeko yar oo ku saabsan beryo uu Feysal Cumar Mushteeg Dugsiga Dayaxa macallin ugu ahaa. Waa xilli ku sinnaa 1965kii oo ay qiyaastii sannadkii 4aad ee Dugsiga dhexe ku jireen. Xisaabta oo af Ingiriisi lagu baranayo ayuu Feysal u bilaabay. Sabuuradda ayuu ugu qori jiray tirooyin ay ka shaqeeyaan, isaguna inta uu dibadda u baxo ayuu daaqadda furan.
jiray si uu u weydiiyo hadba in ay dhammeeyeen. Feysal daaqadda agteeda ayuu is-taagi jiray isaga oo daawan jiray doog ka horreeyay. Wuu foodhyi jiray isaga oo hadba hees ku foodhyaya. Carruurtu show xisaabba kuma maqna ee foodhida Feysal ayay dhegta u raaricinayaan. Hadba wuxu weydiiyaa in ay dhammeeyeen. Iyaguna si uu dibadda u sii taagnaado oo fodhida ugu wado, waxay ku odhan jireen: “Weli ma aanu dhammayn.” Arday ayaa maalin is-olloobay oo yidhi: “Waanu dhammaynnay.” Intii kale ayaa ku dgetay oo tidhi: “Maxaad u odhanaysaa waanu dhammaynnay, foodhida ha noo sii wade.” Waa mid ka mid ah sheekooyinkiisii gaaggaabnaa.